Nofaranana tao Baku, Azerbaijani ny Forum Iraisam-pirenena faha-4 momba ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny kolontsaina UNWTO
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Azerbaijan » Nofaranana tao Baku, Azerbaijani ny Forum Iraisam-pirenena faha-4 momba ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny kolontsaina UNWTO
Enga anie 7, 2017
Ny minisitry ny fizahantany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao tamin'ity herinandro ity dia nankany Baku, Azerbaijan mba hanatrika ny Forum Manerantany momba ny dinika iraisam-pirenena.
Ity fivoriana ity dia tsy zava-dehibe fotsiny mba hihainoana ny filoham-pirenena Azerbaijan, fa nitondra kandidà maro nifaninana tamin'ny asan'ny sekretera jeneraly farany teo alohan'ny fivorian'ny filankevitra ambony tao Madrid ny 12 mey hifidy ilay olona afaka hitarika ny fizahantany manerantany manomboka amin'ny taona 2018.
Azerbaijan no filohan'ny fivorian'ny Executive Executive ho avy.
Anisan'ireo mpilatsaka hofidina i Madam Dho Young-shim avy any Korea, Hon. Walter Mzembi avy any Zimbabwe (sary) ary Andriamatoa Zurab Pololikashvili avy any Georgia izay tsy dia tazana matetika tamin'ny hetsika UNWTO hafa tato ho ato.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Taleb Rifai dia nilaza izany rehefa niresaka tamin'ny mpanatrika tao Baku izy:
Nandre hafatra manan-danja avy amin'ny filoham-pirenena Azerbaijani izahay androany ”, hoy ny sekretera jeneraly, Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) Taleb Rifai tamin'ny lanonam-panokafana ny dinika faha-4 momba ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny kolontsaina.
Nomarihiny fa ny zava-nitranga taloha dia miverimberina amin'ny ho avy: "Amin'ny maha-mpitarika manerantany antsika dia tokony hitodika any amin'ny lalana mahitsy amin'ny sambo tokana isika. Tsy maintsy manome fitsangatsanganana an-kalalahana ho an'ny olona isika. Androany, miatrika zava-tsarotra izao tontolo izao amin'ny toerana maro. Tsy maintsy mifanaja ny olona ”.
Nilaza izy fa ny iray amin'ireo asa 10 dia misy ifandraisany amin'ny fizahan-tany: "Hitombo ny fizarana fizahan-tany amin'ny taona ho avy. Na izany aza, raha manana fahefana isika, dia tokony handray andraikitra ihany koa. Ny hetsiky ny olona 1,800,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dia miteraka vintana ho fampandrosoana ny toekarem-pirenena ”.
Nilaza ny sekretera jeneralin'ny UNWTO fa mety hihatsara ny fahaizan'ny tanora amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny toerana samihafa: “Manankarena ara-panahy ny olona ary mifankahalala amin'ny dia. Androany, misy ny tsy fahampian'ny fandeferana sy ny fahatakarana. Tsy maintsy miray hina ny olona ary miady amin'ny stereotype. Ity taona ity dia hambara ho taom-pizahan-tany. Io dia ahafahantsika mampiray ny ezaka ataontsika. Mety hofoanana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ny fanamby manerantany. Tokony hanaja ny olona, ​​ny tontolo iainana isika ary haneho ny fanajan-tenantsika amin'izany. Handeha hatrany Azerbaijan foana izahay. Azerbaijan dia toerana mahafinaritra, Land of Fire. Manana olona tsara ianao ”.
Nanao fampisehoana nandritra ny hetsika ny ankizy teo an-toerana.
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett, hanatrika ny Forum UNWTO momba ny fizahan-tany Gastronomy
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina no namono ankizy mpianatra 32 tany avaratr'i Tanzania